Creative Writing » အလံထူခွင့်မရတဲ့ရွာကလေး ၁	8
naywoon ni says: ​အော်​ လူက အမူးမ​ပြေ​သေးပါဘူးဆိုမှ ထ​ရေသမားပို့စ်​နဲ့လာတိုး​နေတယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: အဲဒီတာတာတွေလို့ခေါ်တာ.. မွန်ဂိုတွေပဲ..။
ခင်ဇော် says: ဖတ်ရင်း ကြက်ကင် စားချင်တော့တာပါပဲ
လုံမလေးမွန်မွန် says: အပိုင်း(၂) ကို ကူးလိုက်ဦးမယ်…
Wow says: မွန်ဂိုအင်ပါယာက နောက်ဆုံးတလုပ်လက်ယောက်သွားတာ ထင်ဒယ်
kai says: By the time of Kublai’s death in 1294, the Mongol Empire had fractured into four separate khanates or empires, each pursuing its own separate interests and objectives: the Golden Horde khanate in the northwest; the Chagatai Khanate in the west; the Ilkhanate in the southwest; and the Yuan Dynasty based in modern-day Beijing. In 1304, the three western khanates briefly accepted the nominal suzerainty of the Yuan Dynasty, but it was later overthrown by the Han Chinese Ming Dynasty in 1368. The Genghisid rulers returned to Mongolia homeland and continued rule the Post-Imperial Mongolia.
မြစပဲရိုး says: ၁၂၇၉-၁၃၆၈ ယွန်မင်းဆက် အချိန်မှာ မွန်ဂိုတွေ က တရုတ်ပြည် ကို သိမ်းလိုက်ခဲ့တာ လို့ ဖတ်ရတာဘဲ။
အတော်စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2204
koyinmaung says: ဆက်ဖတ်လိုက်အုံးမှ….